Fampivelarana ny kolontsaina : tsy ampy ny mari-boninahitra | NewsMada
Fampivelarana ny kolontsaina : tsy ampy ny mari-boninahitra
Vao andro vitsy izay, notolorana mari-boninahitra ireo mpanakanto eo amin’ny sehatry ny soratra sy ny kabary. Marika ahafantarana fa nahavita be teo amin’ny tontolo nisy azy, izy ireo. Na ho an’ny mpanolotra (minisiteran’ny Kolontsaina), na ho an’ny tolorana, tsy ampy ny fanomezana mari-boninahitra.
Adidy goavana miandry ity departemanta ity ny fiarovana sy fampivelarana ny kolontsaina, asa tanana ary vakoka. Manana ny hoenti-manana amin’izany ve anefa io minisitera io ? « Kely ny teti-bola », hoy ny minisitra. Maro anefa ny asa lehibe tsy ho vitan’ny mpanakanto irery ny fanatanterahana azy. Ho an’ny hira, ady amin’ny piraty sy ny hosoka. Ho an’ny teny sy ny soratra, fampitomboana isa sy fanapariahana ny boky sy ny vakiteny, sns.
Ho an’ny mpanakanto, tsy ampy ny mari-boninahitra fa mila ezaka lehibe izy ireo mba hananan’ny kanto ataony lanja sy hasina manoloana ireo mpandray sy mpanjifa izany. Tsy mamotika ny kolontsaina malagasy ve ny ataona mpanakanto sasany ? Raha sanatria ka « eny » ny valin’io fanontaniana io, adidin’ny mpanakanto izay nanao izany ihany ny manarina ny lesoka.
Mitaky ezaka avy amin’ny tsirairay ny fanolorana sy fandraisana ny mari-boninahitra !